सुधारिँदै बिक्सबी- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — गुगलले आफ्नो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससहितको असिस्टेन्टको सेवा सुधारिएको घोषणा गरेको केही सातामै सामसुङले आफ्नो आगामी स्मार्टफोनमा बिक्सबीको नयाँ संस्करण उपलब्ध हुने सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले अब सार्वजनिक गर्ने सामसुङ नोट नाइनमा बिक्सबीको नयाँ संस्करण उपलब्ध हुने बताएको छ ।
बिक्सीबी २.० नाम रहने यो असिस्टेन्टले गुगलको असिस्टेन्टजस्तै सेवा दिन सक्छ । बिक्सबीको नयाँ संस्करण छिटो र मानिसको आवाज सही तरिकाले पहिचान गर्न सक्ने खालको हुने कम्पनीले जनाएको छ । सन् २०१८ अन्त्यसम्ममा बिक्सबी १ करोड ४० लाख डिजाइनमा प्रयोग हुने कम्पनीको अनुमान छ । केही साताअघि भएको आफ्नो डेभलपर कन्फ्रेन्समा गुगलले असिस्टेन्ट सेवामा सुधारको घोषणा गरेको थियो ।
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ ११:०७
जेष्ठ ११, २०७५ गोकर्ण गौतम
काठमाडौँ — हिरो हुन सुकिलो–मुकिलो, बलिष्ठ ज्यान अनि चकलेटी मुहार नै चाहिने । भिलेनचाहिँ चुल्ठे–मुन्द्रे र अजंगको शरीर । भनुँ न, देख्दै डरलाग्दो हुनुपर्ने । दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, विपिन कार्कीको आगमनसँगै हिरोको परम्परागत परिभाषा बदलियो । खासगरी, लुट रिलिजपछि । अचेल दयाहाङ कोटीका हिरोकै हालिमुहाली छ । यो सबैले देखेको कुरा भइहाल्यो । त्यसो भए भिलेनको सवालमा ?
भिलेनको हुलियामा पनि बदलाब नआएको होइन तर हिरोको अनुपातमा अलि कम । अनि, जति परिवर्तन भएको छ, त्यति याद गरिएको छैन । अचेल पर्दामा देखिने भिलेन डरलाग्दा हुँदैनन्, सुन्दर र सफाचट हुन्छन् । भनौं न, हिरो जस्तै । नपत्याए अनुपविक्रम शाही र प्रशान्त ताम्राकारलाई हेरे पुग्छ । पछिल्लो समय नकारात्मक भूमिकाबाट उनीहरू जति सायदै कोही चिनिएको छ । दुवै मोडलिङ पृष्ठभूमिका हुन् । दुवैसँग ‘हिरो’ का लागि चाहने गुण छ । तैपनि आमदर्शकमाझ नकरात्मक भूमिकाबाट आए । अग्लो कद र आकर्षक शरीरका धनी अनुप भन्छन्, ‘वास्तवमै डनहरू टाईसुटै हुन्छन् । रिलमा पनि त्यस्तै चित्रण हुनुपरिहाल्यो नि ।’
अनुपलाई लाग्छ, हिरो वा गुन्डा भनेर चरित्रलाई छुट्याउन आवश्यक हुन्न । एउटा कलाकारका लागि चरित्र प्रभावकारी र बलियो हुनुपर्‍यो, प्रवृत्ति सकारात्मक वा नकारात्मक के छ, त्यो अलग कुरा हो । उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मैले कहिल्यै हिरो बन्छु भनेर सोचिनँ । सिर्फ कलाकार बन्छु भन्ने मात्र थियो ।’ अक्सर नयाँ कलाकार भिलेनबाट करिअर सुरु गर्न हिचकिचाउँछन्, आफ्नो छविमा असर पर्छ भन्ने भयले । अनुपलाई यो भ्रमले गाँजेन ।
अनुपको यात्रा ‘एन्टागोनिस्ट’ बाटै सुरु भयो, त्यो पनि राजेश हमाल हिरो भएको फिल्म हँसियाबाट । फिल्म व्यावसायिक रूपमा सफल भएन तर अनुपको व्यस्तता बढ्यो ।
राजेशपछि उनी अर्का सुपरस्टार निखिल उप्रेतीको फिल्म किङमा भिलेन बने । यतिबेला अनुप ‘निगमबाबा’ को उपनामले परिचित छन्, फिल्म कृमा उनले निर्वाह गरेको भिलेनको नाम हो त्यो । जसले हिरोइनलाई बलात्कार गर्छ । अवैध धन्दामा संलग्न छ । अनुप सुनाउँछन्, ‘यस्तो घृणित पात्रलाई विश्वसनीय बनाउन साँच्चै मुस्किल पर्नेरहेछ । त्यसमाथि यस्तै पात्रबाट दर्शकको मन जित्न अझ मुस्किल ।’ तर उनी त्यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न धेरै हदसम्म सक्षम रहे । त्यसैले त अनमोल केसी स्टारर यो फिल्ममा अनुप छाया परेनन् ।
अहिलेका अर्का चल्तीका हिरो प्रदीप खड्का अभिनीत लिलीबिलीमा पनि अनुप भिलेनका रूपमा देखिए । पर्दामा सशक्त उपस्थितिका कारण हुनुपर्छ, अनुप भिलेन भएपछि कतिपय हिरोहरू असुरक्षित महसुस गर्छन् । उनको अनुभव के छ त ? ‘कति एक्टर अनुप छ भनेर पनि डराउँछन् तर डराउनु पर्दैन । क्लाइमेक्समा हिरोकै जित हुन्छ,’ उनले सुनाए ।
हिरोमाथि हाबी हुन सक्ने यस्तै सामथ्र्य छ, प्रशान्तसँग पनि । जस्तो : ऐश्वर्याका हिरो रमेश उप्रेती हुन्, उनको चरित्रको नाम के थियो, सायदै कसैलाई याद होला तर प्रशान्तले निर्वाह गरेको चरित्र राघवको अझ चर्चा हुने गर्छ, जबकि राघव त भिलेन थियो । उनको वजनदार आवाज ‘प्लस पोइन्ट’ बनिदियो । ‘यो संसार जित्नेहरूको हो,’ ‘बिजनेसले टाउको दुखाउँछ, तर प्रेमले मुटु दुखाउँछ,’ ‘चाहे जेसुकै गर्नुपरोस्, मलाई त्यो ऐश्वर्या चाहिएको छ,’ लगायतका संवाद औधी हिट भए ।
‘नेगेटिभ रोलबाट त्यस्तो प्रशंसा पाइएला भनेर सोचेकै थिइनँ,’ मुस्कुराउँदै प्रशान्तले भने, ‘पात्रलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । हिरो वा भिलेन जे भए पनि दर्शकले रुचाउँछन् भन्ने आभास भयो ।’ ऐश्वर्या अगाडि पनि उनले मुखौटा र सम्बोधनमा नकारात्मक भूमिकाबाट प्रशंसा कमाएका थिए । ऐश्वर्यापछि त प्रस्तावको ओइरो लागेको उनी बताउँछन् । रणवीरको चरित्रले ऐश्वर्याको राघव बिर्साउने अपेक्षा छ उनको ।
यस्तो नकारात्मक भूमिकाको तयारी कसरी गर्छन् त ? प्रशान्त भन्छन्, ‘जन्मजात कोही नराम्रो हँुदैन । परिस्थितिले गलत कार्यतिर धकेलिदिन्छ । यही सत्यलाई आत्मसात् गरेर नेगेभिट रोललाई जीवन्तता दिने प्रयास गर्छु ।’ उनका अनुसार सुटिङका दौरान पात्रको ‘ह्याङ ओभर’ हुने भए पनि सुटिङ सकिनासाथ पात्रबाट पर भाग्न सक्नुपर्छ । रमाइलो कुराचाहिँ, जय शम्भुमा हिरोचाहिँ अनुप हुन् । उनी ठट्टा गर्छन्, ‘भिलेन बलियो भएपछि मात्र हिरोको भ्यालु बढ्छ । जय शम्भुमा प्रशान्त दाइकै कारण मेरो भ्यालु बढ्दै छ ।’